(War Cusub);-QM Oo Wada Qorshe Lagu Samata Bixinayo Barakacayaasha Magaalada Muqdisho | Allpuntland24.com
(War Cusub);-QM Oo Wada Qorshe Lagu Samata Bixinayo Barakacayaasha Magaalada Muqdisho
Qaar ka mid hay’adaha gargaarka ee Qaramada Midoobay ayaa wada qorshe la doonayo in lagu caawiyo dadka Barakacayaasha ah ee ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay bilaabayaan barnaamij lagu horumarinayo dhalinyarada ka soo jeeda Qoysaska Barakacayaasha, si looga samata bixiyo dhibaatooyinka heysta.
Madaxa hay’adda horumarinta mashaariicda Qaramada Midoobay ee UNDP ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dhalinyarada loo abuuro mashaariic, si loo Baro xirfado ay ku shaqeystaan , taaas oo wax badan ka tari karta noloshooda iyo mida Qoysaskooda.
Barnaamijyada horumarinta ah ee loo sameynayo dhalinyarada Barakacayaasha ah ayaa waxaa ka faa’iideysan doono Barakacayaasha hore ugu sugnaa dalka iyo weliba qaar ka mid ah dadka Qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabtay.
Dhawaan ayaa waxaa m/ Muqdisho lagu soo gaba gabeeyay shir ay ka soo qeyb galeen mas’uulilyiin ka tirsan DFS iyo madax ka socotay hay’adaha gargaarka ee QM, kaas oo looga hadlayay sidii loo Xadida lahaa dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha ku dhuftay dalka.
Qaramada Midoobay ayaa waxaa ay warbixin hore u soo saartay ku sheegtay in dad ka badan 5 Milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaark Bani’aadinimo, kuwaas oo ay sheegeen in ay saameeyn daran ku yeesheen abaaro iyo colaado ka taagan Soomaaliya.